talooyin shukaansi. ku baaqaya,
Last updated: Aug. 25 2019 | 4 min akhri
Shukaansi uusan ahayn oo kaliya madadaalo waa asaasi ah. Badbaadada dhan Our sida noocyada waxay ku xiran tahay xiriir aadanaha. Haddii aan joojino shukaansi, yna jacaylka, iyo waxsoo aynu dhakhso baabi'i lahaa. Laakiin inkastoo nooca ayaa na ka fadilnaa dhammaan qaybaha lagama maarmaanka ah aan u baahanahay si loo badbaadiyo nafteena ka eynu, qof kasta oo aan og yahay sida loo isticmaalo si ay faa'iido ugu wanaagsan. Tani gaar ahaan waa run marka ay timaado shukaansi.
Charlene, Tababaraha leh silsilad dhar waaweyn, iyo Kira, physiotherapist, yimaadaan goobta lagu caweeyo ee caanka ah Galapagos hore ku filan si aad u hesho miis ee bartamaha ficilka, gol weyn ee bar iyo dhulka cayaarta. Pretty ugu dhakhsaha badnaa ee ku wareegaan iyo meesha dhergo. Labada haween ayaa la fashionably labisan oo u eg ay halkan iska leh. Sida Charlene hadlaysa Kira, iyadu uu baaritaanku qolka iyo fiddles leh qaar ka mid ah dhinacyada dabacsan of timaheeda. Lamaane kasta oo ka mid ah daqiiqo ayay wiggles jirkeeda iyo, waqti ka waqti, Bixisaa suxullada iyada oo miiska iyo iyada oo madaxa u yaalaa gacmaheeda ku, pouting iyo samaynta indhaha ugu rajada raga ah ee birta ku. Charlene u maleeyo in ay ka ahaanshaha sexy, laakiin iyadu ma ahan. Waxay samaynayo waxa dad badan oo, rag iyo dumarba, sameeyo marka ay ka soo baxdo on warwareegaan ah: Waxay wareer isagoo sexy in la noqdo cute. Dhab ahaantii, ficilladiisa oo kaliya iyada eegi nabadgelyadiisu caruureed, siinta off tamarta ara-.
Garo, Dhanka kale, muuqataa qarka u saaran iyo kooban. Inta badan ayay aamusnaan fadhiya, iyada oo madaxa abid hoos u si wax yar, oo bixisa si Charlene dareenka. Mararka qaarkood, iyada oo kabashooyin iyada cabitaanka, indhaha isku faca doona sare ee dhalooyinka iyo iyada tartiib ah qaadan doonaa qolka. Dhab ahaantii, hadii aad daawato si dhow, Kira u muuqata in ay ka howl at xawaaraha Charlene qeybtii. Waxay u muuqataa kalsooni iyo amaan oo waxaa la siinaya off koray-up tamarta galmada.
Hadda Kira ayaa lagu arkay Harvey, nin iyadu dhawaan arkeen xaflad laakiin marnaba si fiican u la kulmay. Lahaa Waxay ku sigtay ku filan habeenkii in si dhegahooda isaga hadleynaa shiraaca ee Bahamas, oo wuxuu u maleeyey inuu ahaa soo jiidasho iyo xiiso leh (Kira jecel yahay shiraaca). Haddaba halkan waxa uu la laba guys kale, cuskanaya ay birta ka. Kira dhawraa isaga iyada oo aragti adkayn iyo suga isaga u noqon lahayd in iyada jihada.
Sida ugu dhakhsaha badan uu sameeyo, Kira u tirin ilaa saddex, nafteeda marmarsiiyo, helo ilaa miiska, iyo saunters xagga jaranjarada ilaa balakoonka, midig ee la soo dhaafay Harvey iyo saaxiibbadiis, miskaha xeelad swaying, madax wax yar hoos u. (Maxaad madaxa hoos u? Sababtoo ah waxaan aadanaha oo loo maleeyo inay u xiiso badan oo ay coyness badan brashness.) Markaasuu indhahooda Kira ee xaliyo iyada oo diirada daqiiqad degdeg ah ee xiriir. Wuxuu iyada u arkaa. Shirka labaad ee lagu iyadu Harvey ogyahay ayaa iyada ogaaday, iyada coyly iska muuqataa. Laakiin ka hor inta Harvey uu leeyahay waqti ka jawaabtay, Kira jeelan isaga mar kale, markan indhaha iyada ku dhow abid sidaa wax yar iyada oo bixisa oggayn muusood. Harvey uu helo fariinta.
Joogtada ah Yabooh-ka baxaan waa wadnaha oo aad u of shukaansi. Waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro kacsiga.
Maxaa kaliya aad la arkay waxa weeye waxa saynisyahano wac joogtada ah Yabooh-baxaan qayb ka mid ah Kira iyo jawaab kacsiga ah oo ku saabsan qayb ka mid ah Harvey. Marka ay xaq u timaado, abuurista farax waa dhan oo ku saabsan xiisadda iyo sii daayo, haddii aad la hadlaysid ku saabsan filimada cabsi, coasters shaga, ama galmoodka aadanaha. Joogtada ah Yabooh-baxaan ayaa in Kira isticmaalo on Harvey waa wadnaha oo aad u of shukaansi. Waxa ay isticmaalaan ragga iyo dumarka si ay u abuuraan kacsiga labadaba, iyo dhaqdhaqaaq waa dhab ahaan waxa u sheegay in ay tahay: siinta fiiro, markaas iska qaadanayna, ka dibna waxaa mar kale la siiyo xiisad, release, xiisad; xiriirka indhaha, Bal ha nastee, xiriirka indhaha. One fiirin ma ahan macnaheeda in wax, laakiin Kira sauntered hab daandaansi, Harvey siiyey fiirin labaad, oo dhoola caddeeyey iyada madaxa wax yar hoos u sheegaya in si coyness. Waxaas oo dhan waxaa ku darayaa ilaa signal Gobaleedka oo xiiso leh. Ragga iyo dumarka adduunka oo dhan tan caadiga ah ee aasaasiga ah isticmaalaan, oo ku salaysan saunter qof dumar ah ama nin ah ee swagger, Ulasocto xiriirka indhaha iyo dhoola, si ad iyo kiciyo in qof kale.
Sidaas Kira ayaa khabiirkaan bixiyaa martiqaad iyo daqiiqado ka dib Harvey ayaa ka jawaabey. Ilaa uu yimaado jaranjarada in balakoonka halkaas oo uu bayaan u arki kartaa Kira raadinaya hoos at dabaqa qoob ka ee hoos ku. Wuxuu iyada u muuqataa in isha, dhoolo-, oo wuxuu isu barayaa. “Cabbitaan kale?” Harvey weydiiyo.
“Thanks, laakiin . . .” Kira dhoola iyo jawaabahoodii, “Waxaan halkan la saaxiib ahay oo aan u dabaal iyada dhiirrigelinta, si run ahaantii waxaan waa in dib iyada si aad u hesho.”
“Well,” Jawaabood Harvey, “Waxaad iigu yeedhaan laga yaabaa in ay u dabaal aad la. Dhab ahaantii, Waxaan ugu faraxsanaan lahaa si ay u iibsadaan champagne qaar ka mid ah. Waxaa mar walba wax fiican in aad leedahay cudur daar dhab ah in shekaynaysay iibsadaan.” Waxa uu caytinta.
Inkastoo Kira ogyahay in Charlene ma laheyd hadii Harvey iyaga ku biiray, ayay tiri, “Taasi waa mid aad u deeqsi ah oo idinka mid ah, laakiinse annaga qudhayadu balan qaaday gabdhaha a’ Habeen ka baxay. Waad ogtahay, haleesho on walax qof ahaaneed.” Waxay iyada oo madaxa inclines, eegay isaga oo si kooban, markaas iska jeelan.
Harvey weydiiyo, “Sidee ku saabsan berri ka dibna isla mar, meel isku mid ah, ama waqti isku mid ah, meel kala duwan, ama . . . ?”
Kira qoslo. “Sorry, Waxaan berri xor ma ihi. Laakiin haddii aad i siiyo lambarka, Waxaan idiin ku yeedhi doonaa ka dib marka aan eegno aan jadwalka. Waan hubaa aan wax qaban karo meelaha qaar.”
Runta waxa ay tahay, Kira ogyahay in Charlene ma daryeeli lahaa haddii ay wakhti dheeraad ah ku qaatay la Harvey. Sidoo kale, mashquul habeenkaas soo socda iyada ayaa la qorsheeyay oo dhan waa lagu dhaqdo iyada oo aan. Maxaa Kira sameynayo waa la isticmaalayo mabda 'adduunka aqoonsan yahay ee yaraanta oo qayb ka ah istiraatiijiyadda shukaansi iyada.
Ugu weyn ee yarida:
Sida loo sameysato More jiidanaya
Sida caadiga ah, dadkuba waxay doonayaan in ka badan waxa aan ay ku yeelan karaan, si hab fudud oo aad u kordhiso desirability markii shukaansiga waa in la isticmaalo mabda'a yaraanta. Fikradda waa in aad ku siin aragti ah in aad loo jecel yahay iyo in baahida loo qabo.
Haa, dadka (iyo xataa shirkadaha) isticmaalaan khiyaamo this waqtiga oo dhan, laakiin falcelin aynu u sameynay waa sidaas instinctual in aanu marnaba joojin ku dhacaan, waxaa ka. Tusaale ahaan, qof walbana waa ogyahay in ay sida aadka ugu adag tahay si aad u hesho dhacsaneyn ee makhaayadaha ugu fiican, laakiin sidaas maaha daruuri, maxaa yeelay, miisaskii oo dhan waxaa run ahaantii jaale up. Sidoo kale, nashqadeeyayaasha fashion waa mid aad u gaar ah oo ku saabsan halka ay khadadka ay yihiin suuq, iyo tags qiimaha sare ay u adeegi ka horjoogsanaya in iibsada inta badan. Marka radio, television, iyo xayeysiiya print noo sheegtay Duqeynta la statements sida “Inkasta oo sahay la soo dhaafay,” “Yaree laba halkii macaamil,” “Edition Limited,” iyo “Wanaagsan Sii kaliya ilaa Sunday,” ay ka shaqaynayaan mabda'a yaraanta.
La shaqaynta mabda'a yarida
Sidee qaadashada faa'iidaystaan ​​arrintan caawimaad mabda 'ka dhigo qof jacayl dhici aad la? By gaaratay aad “qiimaha” ku jira marxaladaha hore ee xiriir, samaynta aad u muuqdaan kuwo dhif, qaali, oo ku raad qiimihiisu.